नेपालमा भित्ते-कला(Mural arts) व्यवसायको नयाँ सम्भावना
आफ्नो अफिस र घरका भिताहरु अनि ठूला-ठूला कम्पाउण्डका उराठे खाली भागहरु रङ्गिन चित्रले रङ्गिए भने कस्ता देखिएलान् ?
काठमाडौँ उपत्यकाका कैयौं पर्खालका भित्तामा रङ्गिन चित्रहरु देख्नुभएको छ ?
रेस्टुरेन्टका भित्तामा बनाइएका चित्रहरुले पनि तपाईंको मन तान्ने गरेको हुनुपर्छ !
यसरी भितामा चित्र बनाउनुलाई “भित्ते कला” (Mural Arts) भनिन्छ । रंगमा चोबलेको ब्रस र रोलर भित्तामा कलात्मक तरिकाले चलाएर सुन्दर तस्बिर बनाईदिनेहरु काठमाडौँ र देशका मुख्य शहरहरुमा कुरूप र उराठे पर्खालमा आफ्ना कला देखाईरहेका हुन्छन् । तर व्यावसायिक रुपमा घर, अफिस, रेस्टुरेन्ट आदिका भिता र कम्पाउण्डहरुमा चित्र बनाइदिने मान्छे भने तपाईंले भेट्नुभएको छैन होला ।
आजसम्म यो कामले व्यावसायिक रुप पाउन सकेको छैन, तर यसैमा असिम सम्भावना देखेर व्यावसायिक भित्ते कलाको सुरुवात गर्दैछन् चितवनका नविन्द्र खनाल । सुचना प्रविधि(IT) पढेर स्कुल र क्याम्पसमा पढाउनै ब्यस्त रहेका नविन्द्रले जब यो व्यवसायमा सम्भावना देखे, उनी जागिर चटक्कै छाडेर व्यावसायिक भित्ते कलातर्फै हानिए ।
उनी भन्छन् “आफु बस्ने ठाउँ चिटिक्क पार्ने रहर सबैलाई हुन्छ ।” व्यावसायिक भित्ते कलाको क्षेत्रमा नेपालमा पहिलो व्यवसायी बन्दैछन् नविन्द्र । उनी आँफैले भितामा रङ्ग पोत्ने र सुन्दर चित्र बनाउने भने हैनन् । उनले चीनबाट भित्ते चित्र बनाउने रङ्ग र अन्य आवश्यक सामग्रीहरु ल्याउँछन् । पहिले नै विविध डिजाइनहरु छापिएको स्टेन्सिल(stencil) भनिने उपकरणले उनको कामलाई सजिलो बनाउँछ ।
स्टेन्सिल प्रयोग गर्न आकर्षक चित्र बनाउन जान्ने चित्रकार नै हुनु पनि पर्दैन । स्टेन्सिलले भित्तामा आँफैले चित्रको छाप बनाउन सकिन्छ । भित्तामा बन्ने उक्त छापामा आँफैले रङ्ग लगाउन सकिन्छ । आँफैले रङ्ग लगाउने भएमा नविन्द्रले स्टेन्सिल र अन्य उपकरण उपलब्ध गरईदिन्छन् । स्टेन्सिलमा भएको भन्दा फरक, आफ्नै कल्पनाको चित्र बनाउनु परेमा भने भित्तामा चित्र बनाउने गरेका चित्रकारहरुसँग सहकार्य गर्ने सोँच उनले बनाएका छन् ।
यस्ता चित्रहरु दुई देखि ५ घण्टा भित्रमा बनिसक्छन् र विलकुलै वातावरण अनि स्वास्थ्य मैत्री हुन्छन् । घर, अफिस, रेस्टुरेन्ट, सभा हल जस्ता ठाउँका भित्ताहरुमा यी चित्र बनाउन सकिन्छ । स्टेन्सिल प्रयोग गरि बनाइने र ब्रस प्रयोग गर्न नपर्ने भएकाले यो भितामा चित्र बनाउने प्रविधिलाई ”नो पेन मुरल”(No pen Mural) भनिन्छ । यसको मुख्य आकर्षण नै ग्राहक आँफैले पनि विभिन्न डिजाइनमा भित्ता रङ्गाउन सक्नु हो ।
अहिले नविन्द्रले “ओम डेकोर्स”(Om Decors) को नामले चलाइरहेको भित्ते कलाको व्यवसाय यहि फरकपनका कारण ग्राहकमाझ प्रख्यात हुँदैछ । कुनै चित्रकार ल्याउनु नपर्ने र मान्छेले बनाएको डिजाइन भन्दा सस्तोमा आफ्नो घर वा अफिसको भित्ता रङ्गाउन सकिने भएकाले स्थापना भएको एक महिनामै उनले छ जना ग्राहकको मंजितिसकेका छन् । चितवनमा भएको उनको व्यवसायको सेवा काठमाडौँ देखिका ग्राहकहरुले लिने गरेका छन् । केहि समय अगाडी भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न भएको “प्रोपर्टी एक्स्पो” (आवास निर्माण व्यवसायी, अन्य संस्था र सरकारको संयुक्त प्रदर्शनी कार्यक्रम) मा पनि उनले आफ्नो व्यवसायको जानकारी दिन स्टल राखेका थिए ।
व्यवसाय सुरु गर्नका लागि उनलाई निकै मुस्किल भयो । कम्पनि दर्ता गर्ने प्रक्रिया नै छ महिना लामो भयो भने सामान आयात, सम्भावना, मार्केटिंग र काम गर्ने चरणमा आइपर्ने धेरै समस्या आदिका लागि उनले एक वर्ष समय खर्चिए । अहिले सुरुवाती चरणमै उनको यो व्यवसायको धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । चीनबाट “नो पेन मुरल”का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि आधिकारिक डिलरशिप पनि उनैले लिएका छन् । ग्राहकपनि अपेक्षा अनुरुप नै बढिरहेका छन् ।
IT पढेका र शिक्षण पेशामा मज्जाले जमेका व्यक्ति तानिएको यो भित्ते-कलाको व्यवसाय अन्य धेरै उद्यम गर्न चाहाने युवाका लागि सम्भावना र अवसर दुवै बन्न सक्छ । एकपटक सोंच्ने कि ?
वर्ल्डकपमा खानाको ब्यापार !!
अहिले फिफा वर्ल्डकपको माहोलले फुटबल जगत तातेको...